News - AKATKỌ ngwaahịa! Ọhụrụ Graphene Griiz
PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, Dabere na ụlọ ọrụ nke anyị guzobere na 1988. Anyị nwere ahụmịpụta afọ iri abụọ na abụọ na afọ iri nke ahụmịhe na-arụ ọrụ karịa mba iri anọ na Asia, Africa, Europe na ahịa ụlọ ọrụ America. Anyị na-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin. Ọzọkwa ụgbọ okporo ígwè na njem ụgbọ elu dị ezigbo mma, nke nwere ike ịnyefe oge maka nnyefe.
Anyị ipuiche n'ichepụta Multipurpose Lithium Base Griiz, Grease dị elu, oke mmanu mmanu, Lithium Complex Grease, Aluminom Complex Grease, Griiz Graphite, Calide Griase Anhydrous, Mmanụ Mmanụ, Gear Oil, Hydraulic Oil etc.
Ọtụtụ mgbe, nkwụsị nke griiz bụ ogo 140 ruo ogo 380. Enwere ike iji ha biarin, gwongworo na igwe. Ihe kachasị ewu ewu bụ griiz dị elu dị elu, nke enwere ike iji ya na nnukwu gwongworo ma rụọ ọrụ nke ọma na ihu igwe dị ọkụ.
N'oge a, ndị ọkachamara anyị mepụtara griiz graphene ọhụrụ, nke nkwụsị ya bụ ogo 600 ruo ogo 1000. Griiz Graphene dị ọhụrụ na China ma anyị na-etinye patent ahụ.
Njirimara 1: belata esemokwu site na 50%
Njirimara 2: belata abrasion site na 50%
Njirimara 3: Oge 10 dị ogologo ndụ ndụ, 500000 km mmezi n'efu
Ihe kachasị mkpa bụ iji belata nkwụsi ịnya ụgbọ ala ma chekwaa mmanụ ọkụ 5%
Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike mepụta ngwaahịa akọwapụtara dịka ọchịchọ ndị ahịa si dị. Ma ịhọrọ ngwaahịa dị ugbu a na katalọgụ anyị ma ọ bụ chọọ enyemaka injinia maka ngwa gị, ị nwere ike ịgwa ndị ọrụ ndị ahịa anyị okwu gbasara ihe ị chọrọ.
Anyị na-ele àgwà ahụ anya dị ka ndụ anyị ma nwee njikwa njikwa siri ike na usoro ọ bụla nke ịmịpụta ma sie ọnwụ "Onye ahịa mbụ" dị ka nkà ihe ọmụma azụmahịa anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Anyị na-enye abụghị naanị ngwongwo, kamakwa ọrụ kachasị mma, nke nwere ike ịkwado mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa niile
Anyị ga-arụsi ọrụ ike iji nye ndị ahịa ngwaahịa na ngwaahịa ka mma.